Shantii rag mid ayaa badsada cabista khamriga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Cabitaano khamri ah. sawir: Sawirle: Matthew Mead
Shantii rag mid ayaa badsada cabista khamriga
La daabacay tisdag 27 december 2016 kl 16.20
Shan daloolow mid ragga ah iyo sideed daloolow mid haweenka ah ayaa aad u caba khamriga, middaasina wax yeelo u tahay caafimaadkooda, sida ku cad baaris tira-koob oo ey wada-jir u sameeyeenhayadda caafimaadka bulshada iyo shirkadda wararka ee lagu magacaabo Sirén.
Halka dhanka kale ay hoos u dhacday tayada cabista khamriga ee wiilasha da’da yar, sida uu sheegtay Pi Högberg oo ka howl-gasha hayadda caafimaadka bulshada - Folkhälsomyndigheten.
– Gaar ahaan ragga guud ahaan iyo ragga da’da yar ayay cabista khamrigu uu hoos u dhac ku yimid, halka uu kuwa da’doodu 50 ka sarreeyo uu kor u sii kacayo wax xoogaa ah, sida ay sheegtay Pi Högberg.
Maxay arrintaasi uga dhigan tahay guud ahaan caafimaadka?
– Waa mid aannu la soconno in cabista khamrigu bulshada ku hayso caafimaad-darro, waana mid loo baahan yahay sidii looga hor-tegi lahaa isticmaalka xad-dhaafka ah ee khamriga, sida ay sheegtay Pi Högberg.
Deegaannada ayaa sidoo kale ku kala duwan isticmaalka khamriga xad-dhaafka ah iyo cabbidiisa. Gobolka Kronoberg ayey sheegeen dadyoowgii wareeysiyada lagula yeeshey iney 12 boqolkii dadka ku dhaqani ey khamriga u cabbaan si xad-dhaaf ah, halka tiradaa dhiggeeda ee magaalada Stockholm gaarsii-san tahay 19 boqolkiiba.